Kismaayo News » Farmaajo oo amaanay heshiiska ay xukuumaddu la gashay Qadar iyo Maraykanka
Kn: Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa bogaadiyay heshiiska horumarineed ee ay dawladdiisu la gashay Qadar iyo Maraykanka taasi oo uu ku tilmaamay horumar balaadhan oo ay ka sameeyeen dhinaca xiriirka caalamka iyo siyaasadda dibadda.
Farmaajo oo umuurtaasi ka hadlaya ayaa yiri, “Heshiisyada horumarineed ee aan la galnay Mareykanka iyo Qatar waxay si xoojinayaan xiriirka haatan naga dhaxeeya dowladahaas, waxa ayna caddayn muuqata u tahay sida uu u sii xoogaysanayo iskaashiga iyo xirriirka aan caalamka la leenahay iyo kalsoonida lagu qabo hay’adaha dowladda.”
Hadalka Farmaajo ayaa imaanaya kadib markii hay’adda USAID ee dawladda Maraykanka u qaabilsan dhinaca horumarinta iyo Hay’adda dalka Qadar u qaabilsan horumarinta iyo gargaarka ay dawladda Soomaaliya la kala sixiixdeen mashruucyo wadar ahaan ay ku kacayso 500 oo milyan oo doolarka Maraykanka ah. Maraykanka ayaa 300 oo milyan ku bixinaya waxbarashada, caafimaadka, kobcinta dhaqaalaha iyo maamul wanaagga, halka dawladda Qadar ay 200 oo milyan ku bixinayso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurista dhalinyarada iyo dismaha xarumaha dawliga ah.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya faa’iidooyinka mashaariicdani u leeyihiin Soomaaliya ayaa yiri, “Maal-gelinta iyo taageerada horumarineed ee intaa le’eg ma ahan mid ku kooban dib-u-dhiska dalka oo kaliya ee waa mid kor u qaadaysa kaabayaasha dhaqaalaheenna, taas oo dhabaha u xaareysa in nolol wanaagsan ay helaan shacabka Soomaaliyeed. Waxay markhaati u tahay dadaalka aan ku bixineyno in ay Soomaaliya ka hana qaado nabad iyo barwaaqo la isku halleyn karo.”